साउन ३०, काठमाण्डौ । नेपाल एसोसिएन अफ राफ्टिङ एजेण्ट्स(नारा)को नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन मिति घोषणासँगै नेतृत्वमा अन्तिम रस्साकस्सी सुरु भैसकेको छ ।
यही भदौ २४ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासीका रुपमा गंगा नेपालको नाम चर्चामा छ । दुई कार्यकाल महासचिबका रुपमा भुमिका निर्वाह गरिसकेका नेपाल नेपालको जल पर्यटनलाई बिश्वसामु चिनाउन र अतिक्रमण रोक्नका लागि आफ्नो बिकल्प नभएको उनको भनाई छ । जलपर्यटनमा २३ बर्ष बिताएका नेपालको, उमेद्धवारीमाथिको केही सवाल ।
१. नेपालको जलपर्यटनको बर्तमान अवस्था के छ ?
जलमार्गहरु अहिले चपेटामा परेको छ । पर्यटन निती नहुँदा जथाभावी हाईड्रोपावर निर्माण गर्ने ढुंगा गिट्टि निकाल्ने कार्यले जलमार्ग साँघुरिदै गएको अवस्था छ । स्पष्ट नितिकै अभावले यी सबै कुराहरु भैराखेको छ ।
२. धरासायी बन्दै गईरहेको राफ्टिङ व्यावसाय संरक्षणको लागि गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त राज्यको निती नै हो । अहिले १६ वटा खोलामा राफ्टिङका लागि खुल्ला गरिएको भनिएको छ, तर तिनै खोलानालाहरुमा पनि सरकारी हस्तक्षेप देखीन्छ । व्यावसायीसँग परामर्श नगरी जथाभावी ड्याम बनाउने, गिटि बालुवा निकाल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । यसले जलपर्यटन मात्र होईन चलचरहरुलाई समेत असर परिरहेको कुरा राज्यले बुझ्न सक्नुपर्छ ।
३. पहिलाका नारा नेतृत्वहरुले गरेका कामलाई चै कसरी लिनुभएको छ ?
विगतमा जेजति भए, त्यसलाई धन्यबाद । राम्रा कामलाई अनुशरण गर्छु, नराम्रा भए सच्याउँदै अगाडी बढ्न जरुरी छ । नाराले संस्थागत रुपमा गर्नुपर्ने काम गरेकै छ ।
४. यसमा राज्यको निति चै कस्तो हुनुपर्छ ?
त्रिशुली, भोटेकोशी लगायतका नदीहरु राफ्टिङका लागि छुट्याईएको छ । त्यसमा अतिक्रमण बन्द हुनुपर्यो । हाईड्रोपावरको बिरोध हैन, तर त्यो पनि सिस्टममा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । अर्को अबैधानिक राफ्टिङ उद्यमीहरुको समस्या पनि जलपर्यटनले खेपिरहेको छ । बिदेशबाट आएर कायाकिङमा दौडिहाल्ने प्रबृत्ति छ, यसमा यहाँका व्यावसायीसँग समन्वय भएको देखिदैन, यस्तो लापरवाहीपूर्ण छुटको अवस्था हुन भएन । अर्को कुरा जथाभावी ढुंगागिट्टी निकाल्ने कार्यले नदी धमीलो हुदै गएको छ भने धार परिवर्तनको खतरा पनि छ । यसमा राज्य गम्भिर हुन जरुरी छ ।
५. तपाईलाई किन जिताउने ?
जलपर्यटन क्षेत्र अहिले बिकरालको स्थीतिमा छ । अधोगतितर्फ उन्मुख राफ्टिङ क्षेत्रलाई आशाको केन्द्रमा रुपान्तरण गर्छु । तलदेखी माथिसम्म समन्वयकारी भुमिका खेल्दै सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गर्न मेरो उमेद्धवारी रहेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण जलपर्यटन व्यावसायी, सदस्य तथा शुभेच्छुकहरुमा सहयोगका लागि अनुरोध पनि गर्दछु । सबैसँग हातेमालो गरेर नै जलपर्यटनका समस्यालाई निराकरण गर्न म सधै प्रतिबद्ध हुनेछु । यही नै मेरो बुझाई हो ।